ह्यामरी केन चार महिना मैदान बाहिर – Kathmandutoday.com
ह्यामरी केन चार महिना मैदान बाहिर
काठमाण्डु टुडे २०७६ पुष २६ गते १३:२५ मा प्रकाशित
एजेन्सी – इङ्लिस क्लब टोटेनहमका प्रमुख फरवार्ड ह्यारी केन करिब चार महिना मैदान बाहिर रहने भएका छन्। ह्यामस्ट्रिङको चोटका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले केन अप्रिलसम्म मैदान बाहिर रहने पुष्टि क्लबले गरेको छ।
२६ वर्षीय केन नयाँ वर्षको पहिलो दिन साउथह्याम्टनविरुद्वको खेलमा चोटग्रस्त भएका थिए। उनले प्रिमियर लिगका केही खेलसँगै च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा जर्मन क्लब आरबी लिपजिगविरुद्वको खेल पनि गुमाउने पक्का भएको छ। ङ्ल्याण्डका कप्तान केन मैदान फर्कने समय तोकिएको छैन।
क्लबले शल्यक्रिया आवश्यक रहेको जनाउँदै चार महिनापछि मात्रै मैदानमा उत्रन सक्ने जनाएको छ। उनी अप्रिलमा तालिममा फर्किने बताइएको छ। उनी सन् २०२० को युरोकप सुरु हुनु दुई महिना अघि मात्र मैदानमा आउने भएका हुन्। मेडिकल स्टाफको पछिल्लो एक साताको निरीक्षणपछि केनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निचोड निकालिएको हो।
उत्कृष्ट फर्ममा रहेका केनले इङ्ल्यान्डका लागि र क्लबका लागि यो सिजन ३१ खेलबाट २७ गोल गरिसकेका छन्। टोटनह्या म अहिले प्रिमियर लिगको छैटौँ स्थानमा छ।
नेपाली सेनामा असन्तुष्टि, प्रधान सेनापतिलाई खुला पत्र
भारत केपी ओलीलाई बर्खास्त गरेर राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छ !
नेकपामा प्रचण्डको हात माथि, एमसीसीबाट ब्याक भए ओली
काठमाण्डु उपत्यका कोरोनाको उच्च जोखिममा !
‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा पारसको समर्थन, सत्याग्रही भेट्न अस्पताल पुगे पारस
सँगै नहरमा हामफाले प्रेम जोडी
केपी ओलीका पक्षमा सडक प्रदर्शन नगर्न निर्देशन
कोरोना संक्रमितले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्यो
काठमाण्डुमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु